भोलि देखि सोह्र श्राद्ध शुरू हुँदै, पितृपक्षमा के गर्ने के नगर्ने ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»धर्म/दर्शन»भोलि देखि सोह्र श्राद्ध शुरू हुँदै, पितृपक्षमा के गर्ने के नगर्ने ?
By मनिषा थापा on ८ आश्विन २०७५, सोमबार ०७:५३ धर्म/दर्शन
एजेन्सी : चन्द्रमान-अनुसार आश्विन कृष्ण पक्षलाई पितृपक्ष वा सामान्य बोलीचालीको भाषामा सोह्र श्राद्ध भनिन्छ। एक पक्षमा १५ तिथि हुने भए पनि भाद्र शुक्लपूर्णिमादेखि आश्विन औँसी(जमरे औंसी)सम्मका १६ तिथिमा श्राद्ध गरिने भएकाले यस समयमा गरिने श्राद्धलाई सोह्र श्राद्ध भनिएको हो। कसैकसैले सोह्र दिनको गणना गर्दा आश्व्वीन कृष्णपक्ष प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा मातामह श्राद्धसम्मका सोह्र दिनलाई लिने गर्दछन्। यसलाई पार्वण श्राद्ध पनि भनिन्छ।